အကောင်းဆုံးသံစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ဖို့ Aukey EP-B67 Magnetic Wireless Earbuds လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။Treble သံ၊ Bassသံ တွေကို Contro Key ကနေချိန်ညှိပြီးနားဆင်နိုင်မယ့် Equalizer ပါဝင်တဲ့ EP-B67 ကခရီးသွားရင်းသီချင်းနားထောင်တဲ့ အချိန်မှာပဲသုံးသုံး၊ အားလပ်ချိန်မှာအပန်းဖြေဖို့ပဲသုံးသုံး music crazy တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Wireless Earphone လေးဖြစ်ပါတယ်။ ၈နာရီကြာခံတဲ့ Battery Life IPX4 ပါဝင်လို့ချွေးထွက်ရင်လဲစိတ်ပူစရာမလို၊Magnetic Clip နဲ့ Audio Power On/Off ကိုလဲထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
Aukey PB-XD12 10000mAh USB C Power Bank
PB-XD12 လေးကတော့ Aukey က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Power Bank လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။10000Mah ပါဝင်တာဖြစ်ပြီး Quick Charge ရရှိနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ USB 2ports, Micro, Type-C ports တွေ ပါဝင်တာဖြစ်ပြီး တစ်ပြိုင်နက် လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Aukey PA-T143Port Wall Charger
သင့် Electronic Device တွေကို စိတ်ချလက်ချနဲ့ အားသွင်းနိုင်ဖို့ Wall Charger ကိုရှာဖွေနေပါသလား? သင့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ Electronic Device တွေကို အားသွင်းဖို့ Charger တွေအများကြီးမလိုတော့ပါဘူး...PA-T14 Wall chargerတစ်ခုရှိရုံနဲ့ ပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်။ Pa-T14 ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ Quick Charge နည်းပညာကြောင့် သာမန် Chargerတွေထက် အားသွင်းတဲ့အခါ ပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်ပါတယ်။Device (၃)ခု တစ်ပြိုင်တည်းအားသွင်းနိုင်တော့ မီးပလပ်ပေါက်အတွက် နေရာအများကြီးမလိုတော့ပါဘူး။Original Charger မရှိလဲ ပူစရာမလိုဘဲ စိတ်ချလက်ချအားသွင်းလို့ရပါတယ်။Qualcomm QuickCharge(လိမ္မော်ရောင် Port)၊ AiPower Technology (2) Ports ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အားသွင်းနှုန်းမြန်ဆန်သလို safe လဲဖြစ်၊ Device (၃)မျိုးကိုလည်း Charging သွင်းနိုင်တဲ့ PA-T14 Wall Charger သာ ဆောင်ထားလိုက်ပါ...လူကြီးမင်းတို့အတွက် အမှန်တကယ်အသုံးတည့်မယ့် ပစ္စည်းကောင်းလေးဆိုတာ အာမခံပါတယ်ဗျာ။
Aukey PA-B3 65W Dual-Port PD Wall Charger
Aukey PA-B3 65W Dual-Port PD Wall Charger လေးနဲ့အားသွင်းကြမယ်..... Smartphone တစ်ခု အားသွင်းမြန်အောင် လုပ်ပေးရာမှာ ဖုန်းရဲ့ အားသွင်းစနစ်နည်းပညာကလည်း အလွန်ပဲ အရေးပါလှသလို၊ အသုံးပြုတဲ့ အားသွင်းခေါင်း(charger) နဲ့ အားသွင်းကြိုး(cable) တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်း အရေးပါလှပါတယ်။Fast charging လုပ်ပေးတဲ့ charger တွေမှာ အလွန်အရေးကြီးတာကတော့ အားသွင်းနေတုန်း Current တွေ၊ Voltage တွေကို၊ ဖုန်းရဲ့ အားလက်ကျန် အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ထိန်းညှိပေးဖို့ လိုအပ်တာပါ။
Aukey CB-CD5 1.2Meter Type-C to C Cable
AUKEY ရဲ့ Power Bank ၊ Wall Charger ၊ USB Cable တွေဟာ Ai Power ၊ PD စတဲ့နည်းပညာတွေပါဝင်ပြီး Apple certified ရရှိထားတာကြောင့် iPhone Fast Charging အတွက် စိတ်အချဆုံးသုံးနိုင်ပါတယ်။အားဝင်လည်းမြန် Warranty ကလည်း ၁နှစ် နဲ့ ၆လဆိုတော့ စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Aukey PA- T15 Quick Charger 3.05Ports
Aukey PA- T15 Quick Charger 3.05Ports လေးကတော့ အားသွင်းဖို့ Device တွေကများ၊ ပလက်ပေါက်မလုံလောက်ဖို့ စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင် PA-T15 Wall Charger ကိုသာ သတိရလိုက်ပါ...Ai Power Port လေးခု နှင့် Quick Charge တစ်ခု ပါဝင်လို့ အားသွင်းခေါင်းတစ်ခုထဲနဲ့ ဖုန်း ၅ လုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း အားသွင်းလို့ရပါတယ်... Quick Charge 3.0 Port က Quick Charge Support လုပ်တဲ့ ဖုန်းတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အားသွင်းလို့ရပါတယ်... Entire Protect ပါဝင်လို့ Over-current၊ Over-Charging ဖြစ်မှာ စိတ်ပူနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး... 18 Month Warranty လဲ ပေးထားလို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
2.4A Output အထိ အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ မကြာခင်မှာ 3.0A Outputအထိထုတ်ပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့် smartphone ရဲ့ current လက်ခံနိုင်စွမ်းရဲ့ အမြင့်ဆုံးကိုသာ output ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် over-current ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ AUKEY mini dual-port Wall Charger (PA-U32) က သင့်အတွက် အဖော်မွန်ကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ... နေရာတိုင်း အလွယ်တကူ သယ်သွားနိုင်တဲ့အပြင် Ai Power နည်းပညာသုံး USB port (၂) ခုပါဝင်လို့ ဖုန်းနှစ်လုံးကိုလဲ တစ်ပြိုင်နက် အားသွင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်...
Aukey LC-Q6 Wireless Charger
LC-Q6 Wireless Charging Pad အားသွင်းတိုင်း အထာကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ AUKEY LC-Q6 Wireless Charger လေးရှိနေပါပြီနော်.. ပါးပါးလေးနဲ့ ဒီဇိုင်းမိုက်၊ ဖုန်းလေးတင်လိုက်တာနဲ့ အားသွင်းရုံပဲ..ဒါ့အပြင် 10 W နဲ့ အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်လို့ iPhone တွေအတွက် အမြန်ဆုံး Fast Wireless Charging ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်....အားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲ 3mm ထက် ပါးတဲ့ Phone Case တွေဆိုရင် ဖြုတ်ပြီး အားသွင်းဖို့ မလိုပါဘူး...(ပုံမှန် Case တွေကလဲ3mm ထက်ပါးတာမို့လို့ Case ကို အားသွင်းတိုင်း ဖြုတ်နေဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ ) တော်တော်လေးတော့ ကြွေချင်စရာပါပဲ ဗျာ... ဒါ့အပြင် ‘iF Design Award 2018’ နဲ့ ‘Red Dot Design Award 2018’ တွေကို ရရှိထားလို့ အားသွင်းတိုင်း အထာကျနေမှာ အသေအချာပါပဲ...AUKEY LC-Q6 Wireless Charger က အားပြန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာလဲ အားပြည့်တာနဲ့ အလိုအလျောက် ရပ်ပေးတဲ့ စနစ်ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး အပူချိန်အရမ်းများလာတာမျိုးကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးထားလို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Aukey PA-F3 30W 2-Port PD Charger
Aukey PA-F3 30W 2-Port PD Charger လေးကတော့ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 11 Series, X Series, 8 Series နှင့် Android ဖုန်းများကို 18 Watt PD အားသွင်းမြန်စနစ် ဖြင့် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ iPhone များအတွက်0% မှ 50 % အထိ မိနစ် ၃၀ အတွင်း အားသွင်းနိုင်တဲ့ စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ 18W USB -C တစ်ပေါက် မပြင် 12W USB-A တစ်ပေါက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ (နှစ်ပေါက်တစ်ပြိုင်နက်အားသွင်းနိုင်ပါသည်။)အားသွင်းနှုန်းကိုလျော့ချခြင်းမရှိပဲ Device နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်အားသွင်းနိုင်တဲ့ Charger တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျစ်လျစ်ပေါ့ပါးတဲ့ Design နဲ့ ခေါက်လို့ရတဲ့ ပလက်ခေါင်းပါဝင်ပြီး Slim Charger ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူစေပါတယ်။
Aukey CB-CL1 Cable
ပန်းသီး Users တွေအတွက် အားသွင်းတာနဲ့ Data ကူးတဲ့ အပိုင်းတွေမှာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်စေမဲ့Aukey ရဲ့From Type - C to Lighting Cable တစ်ခုဖြစ်တဲ့CB-CL1 Data Cable လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Aukey CB-CL12 Sync & Charger Cable
Aukey CB-CL12 Sync & Charger Cable သည် ထူးခြားခိုင်မာသော ဒီဇိုင်းနှင့်ကြာရှည်ခံသော အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ iPhone X Series ကို မိနစ် ၃၀ အတွင်း ၅၀% အထိအားသွင်းနိုင်ပါသည်။ MacBook ကိုပြောင်းလဲမှု adapter မသုံးပဲ တိုက်ရိုက် အားသွင်းလို့ရပါသည်။
Aukey PA-B1 20W Power Delivery Wall Charger
Aukey PA-B1 20W Power Delivery Wall Charger လေးကတော့ Input 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A နှင့် Output 20W ဖြစ်ပြီးတော့ အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့ 33g ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Aukey DR-02 Car Dash Camera
FHD 1080p: Sony Exmor Sensor သည်အရာရာကို 1080p ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် super-wide 170 °မြင်ကွင်း တွင်ဖမ်းယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညအချိန်၌ကားမောင်းရန်အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်အထူးကောင်းမွန် ပါသည်။ ပြင်းထန်သောအပူချိန်လည်ပတ်မှု - ဤကင်မရာသည်အပူနှင့်အအေးခံနိုင်ရန် (-30 ° C - 75 ° C / -22 ° F - 167 ° F) နှင့်စံဘက်ထရီနည်းပညာထက်သက်တမ်းပိုရှည်ရန်အတွက် supercapacitor ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Emergency Recording & Loop Recording: Emergency Recording သည်မမျှော်လင့်သောမောင်းနှင်မှုဖြစ်စဉ်များ ကိုအလိုအလျောက်ဖမ်းယူပြီးအသံများကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။ Loop Recording သည်မလိုအပ်သောဟောင်းနွမ်း သောဗီဒီယိုများကိုကူးယူခြင်းဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။Motion Detection: G-sensor ပါ ၀င် သောကြောင့် dash ကင်မရာသည်ရုတ်တရက်တုန်ခါခြင်း / collision ကိုအလိုအလျောက်သိရှိနိုင်သည်။ ကားစက်နှိုး ခြင်းကိုပိတ်ထားသည့်တိုင်သင်၏ dash ကင်မရာအားပါဝါထောက်ပံ့မှုကိုထိန်းသိမ်းရန် hardwire kit သို့မဟုတ် AUKEY PM-YY (သီးခြားစီရောင်းသည်) နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ပါ ၀င်သည့်ပစ္စည်းများ - AUKEY DR02 Dashboard ကင်မရာ၊ Dual-Port USB Car Charger, USB Mini-B ပါဝါ Cable (4m / 4.37yd), Sticker Mount၊ 3M Stickers နှစ်ခု၊ Cable Clips ခြောက်ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Aukey Ai-W20 Wearbuds
Aukey Ai-W20 Wearbuds လေးကတော့ Hi-Fi စနစ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အသံထွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။အားတစ်ခါသွင်းထားရင် ၁၃နာရီ အထိ အသုံးခံပါတယ်။Band အနေနဲ့ IPX5 ဖြစ်ပြီးတော့၊ Ear Buds တွေက IPX6 ရေစိုခံစနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။Bluetooth 5.0 ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ပါဝင်ပါတယ်။Smart Watch အနေနဲ့ လည်း ခြေလှမ်းတိုင်းတာ၊ Calories ပမာဏ၊ Heart Rate စတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ တိုင်းတာမှု တော်တော်များများကို တိုင်းတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင့် ဖုန်းမှာ WearBud Application ကို အသုံးပြုပြီးလည်း Data တွေကို Sync လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ - Magnetic Charging Cable ဖြင့် အားပြန်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Aukey CB-AKL1 Kevlar Core Lightning to USB-A Cable
Aukey CB-AKL1 cable လေးကတော့ ကြိုးအရှည် ၁.၂မီတာ အရှည်ရှိပြီးတော့ အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့ ၀.၅ကီလိုဂရမ် ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Fast Charging ရတဲ့အပြင် Data ရတဲ့ ကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။